SIM Unlock လုပ်နည်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Lock/Unlock Phone Application နည်းလမ်းများ SIM Unlock လုပ်နည်း
Maung Pauk at 12:31:00 PM Lock/Unlock, Phone Application, နည်းလမ်းများ,
ဒီပို့စ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် စမ်းသပ်ထားခြင်းမရှိသေးကြောင်း ဝန်ခံလိုပါတယ်.. ဘလော့တစ်ခုမှာ ရေးထားတာကို ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်းပါ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းလမ်းတစ်ခုဟာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် ဆေးနည်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးတည့်နိုင်ပါတယ်..
1.ပထမဆုံး SIM Lock ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းဟာ Root ဖောက်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်..
2. ဖုန်းရဲ့ IMEI ကိုမှတ်ထားပေးပါ.. ( ဖုန်းရဲ့ ဓါတ်ခဲကိုဖြုတ်လိုက်ရင် IMEI တွေ့ပါမယ်.. ဒါမှမဟုတ် *#06# ဆိုရင်လည်း IMEI ရပါတယ်. )
3. ဖုန်းမှာ Android Terminal Emulator ကိုဒေါင်းပြီး ဖုန်းမှာ Install လုပ်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် Unlock Code ကုဒ်တွက်ပါမယ်.. ဖုန်းထဲက Android Terminal Emulator ကို ဖွင့်ပြီး အောက်က စာသားအတိုင်းရိုက်ပါ.. [enter] ဆိုတာ ဖုန်းထဲက Enter နှိပ်ရမှာပါ..
strings -n 8 /dev/block/mmcblk0p6[enter]
ဒါဆိုရင်တော့ Unlock Code တစ်ခုတွေ့ပါမယ်.. ဥပမာ - UN_Lock_code = 063312345
4. ကွန်ပျူတာအပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီ.. SIM Unlock Software ကိုဒေါင်းပြီး ကွန်ပျူတာမှာ Run ပါ.. ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်ထားစရာမလိုပါဘူး..
5. SIM Unlock ရဲ့ အကွက်ထဲမှာ အပေါ်ဆုံးကအကွက်မှာ ခုနက ဖုန်းထဲမှာ တွက်ခဲ့တဲ့ Unlock Code ကိုဖြည့်ပေးရပါမယ်.. ဒုတိယအကွက်ထဲမှာ IMEI နံပတ်ရဲ့ နောက်ဆုံး (၇)လုံးကို ဖြည့်ပေးရပါမယ်.. ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. SIM Unlock Code ကိုရပါပြီ..
ဒီပို့ဈနဲ့ပတျသကျလို့ ကြှနျတျော စမျးသပျထားခွငျးမရှိသေးကွောငျး ဝနျခံလိုပါတယျ.. ဘလော့တဈခုမှာ ရေးထားတာကို ပွနျလညျ မြှဝပေေးခွငျးပါ.. ဘာပဲဖွဈဖွဈ နညျးလမျးတဈခုဟာ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ မိတျဆှမြေားအတှကျ ဆေးနညျးတဈခုအဖွဈ အသုံးတညျ့နိုငျပါတယျ..
SIM Unlock လုပျနညျး
1.ပထမဆုံး SIM Lock ဖွဈနတေဲ့ဖုနျးဟာ Root ဖောကျပွီးသားဖွဈရပါမယျ..
2. ဖုနျးရဲ့ IMEI ကိုမှတျထားပေးပါ.. ( ဖုနျးရဲ့ ဓါတျခဲကိုဖွုတျလိုကျရငျ IMEI တှပေ့ါမယျ.. ဒါမှမဟုတျ *#06# ဆိုရငျလညျး IMEI ရပါတယျ. )
3. ဖုနျးမှာ Android Terminal Emulator ကိုဒေါငျးပွီး ဖုနျးမှာ Install လုပျလိုကျပါ.. ပွီးရငျ Unlock Code ကုဒျတှကျပါမယျ.. ဖုနျးထဲက Android Terminal Emulator ကို ဖှငျ့ပွီး အောကျက စာသားအတိုငျးရိုကျပါ.. [enter] ဆိုတာ ဖုနျးထဲက Enter နှိပျရမှာပါ..
ဒါဆိုရငျတော့ Unlock Code တဈခုတှပေ့ါမယျ.. ဥပမာ - UN_Lock_code = 063312345
4. ကှနျပြူတာအပိုငျးကိုရောကျလာပါပွီ.. SIM Unlock Software ကိုဒေါငျးပွီး ကှနျပြူတာမှာ Run ပါ.. ဖုနျးနဲ့ကှနျပြူတာ ခြိတျဆကျထားစရာမလိုပါဘူး..
5. SIM Unlock ရဲ့ အကှကျထဲမှာ အပျေါဆုံးကအကှကျမှာ ခုနက ဖုနျးထဲမှာ တှကျခဲ့တဲ့ Unlock Code ကိုဖွညျ့ပေးရပါမယျ.. ဒုတိယအကှကျထဲမှာ IMEI နံပတျရဲ့ နောကျဆုံး (၇)လုံးကို ဖွညျ့ပေးရပါမယျ.. ပွီးရငျ OK ကိုနှိပျလိုကျပါ.. SIM Unlock Code ကိုရပါပွီ..
Credit : htarwaiethar.org
Android Terminal Emulator 1.0.62 : 503 Kb
SIM Unlock exe : 56.4 Kb
Lock/Unlock, Phone Application, နည်းလမ်းများ
Lock/Unlock Phone Application နည်းလမ်းများ
Anonymous December 10, 2015 at 7:28 PM
Sim Unlock Code ရပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ ခင်ဗျာ့။